Nbudata MiG-21MF FSX & P3D - Rikoooo
downloads 25 340
a add-on bụ maka ndị hụrụ ịme ntụpọ siri ike egwu, pụtara na ị nweghị ike ịmalite injin ndị ahụ n’ebughị ụzọ gụọ akwụkwọ ahụ wee ghọta ya. Ọ baghị uru ibudata ma ọ bụrụ na ịnweghị njikere itinye ego iji ghọta otu esi arụ ọrụ. Usoro na njiri mara kobere dị ka nke ezigbo MIG-21 MF. Ihe ngwugwu a nwere ụda 100% n'ezie, ndozi ọzọ na VC mara mma. Ihe ngosi nke mpụga na-eme nke ọma. N'ihi na FSX-SP2 ma ọ bụ ngwangwa.
N'ihi na-ahụ-anya na ọ bụ ihe amamihe na-enwe otu larịị nke flaapu na kacha mkpụbelata.
The ntuziaka gụnyere na nke a mkpọ a na-na Czech, Otú ọ dị, Rikoooo hụrụ sụgharịa otu Lukasz Kacprzykowski. Download ya n'okpuru
The Mikoyan-Gurevich mig-21 bụ a Soviet fighter ụgbọelu na-mara site na NATO koodu Fishbed. Nke a bụ ugboelu ngwaahịa niile oge, na n'elu 11,000 mbipụta.
Nnọọ ike na agile, ndị mig-21 bụ Otú ọ dị bụghị nnọọ ogologo na ọgụ na electronic ịkwụsi navigation,-eme ka ọ na-"ụgbọelu pilot", na-arụpụta na-adabere kpamkpam na ọgụ nkà nke ikpeazụ. N'agbanyeghị ya adịghị ike, ọ bụ nnọọ ewu ewu: ya dịtụ ala na-eri ihe emewo ka ọtụtụ ikuku agha ka ha buru ụzọ supersonic fighter.
Ngosi video si Fox 4 so Rikoooo
Basic-efe efe na usoro
-Amu amu video maka malite engines na Air Gosi (ezigbo)
Video: 10 nkeji nke happyness (ezigbo)
Onye edemede: Ivan Jurcaga - Peter Priskin - Kendy Schwarz
Nchịkọta UKMIL Blackburn buccaneer S2 FSX & P3D 2.1